Marxuum Abwaan Sugulle oo Hargaysa Aas Qaran loogu sameeyay – STAR FM SOMALIA
Marxuum Abwaan Sugulle oo Hargaysa Aas Qaran loogu sameeyay
Allaha u naxariistee waxaa saaka Magaalada Hargaysa ee xarunta Somaliland lagu aasay Marxuum Abwaan Cali Sugule Cigaal “Dun Carbeed” kaasi oo saaka Meydkiisa laga soo dejiyay Garoonka Cigaal ee Magaalada Hargaysa.
Marxuumka ayaa loo sameeyay aas Qaran oo ay ka qaybgaleen Madaxda Somaliland iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada ku nool Magaalada Hargaysa.
Alle ha u naxariistee Markii Maydka laga soo dejiyey Diyaarada waxa hareera joogay una diyaar ahaa cutubyo ka mida Ciidamada Somaliland, marxuumka oo ahaa Abwaan qaran oo dalka iyo dadkaba ka baxay, markii laga soo qaaday maydka marxuumka madaarka Cigaal International Airport waxaa salaadii Jinaasada lagaga tukaday masjidka tabliiqiyiinta iyadoo halkaasina looga sii qaaday dhanka xabaashii loo qoday oo diyaar ahayd, waxaana bud-dhigay Ciidamada Qaranka.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud “Siilaanyo” ayaa marxuumka Ilaaheey ugu baryay inuu janadii Fardowso ugu Bishaareeyo.
Dhamaan Dadkii kale ee Aaska ka qaybgalay ayaa si aad ah ugu duceeyay Marxuumka oo si weyn Umadda ay u wada xasuusato.
Shirka Madasha Wadatashiga Qaran oo si rasmi ah kaga furmay Kismaayo